Safarka maalinlaha ah ee Salzburg laga bilaabo Vienna
Safarka maalinlaha ah ee Salzburg
Safarka Cuntada ee Prague
Corpus Christi ee Austria
Jidka Socodka Karst
Neustadt ee Salzburg, oo sidoo kale loo yaqaan Andräviertel, waqooyiga Mirabell Gardens, waxaa ku yaal meel bannaan oo caws ah oo la qaabeeyey, dhul-beereed, waxa loogu yeero Kurpark, halkaas oo bannaanka agagaarka Andräkirche la abuuray ka dib markii la burburiyay bassooyinkii hore ee waaweynaa. . Beerta spa waxay ka kooban tahay dhowr geed oo da' weyn sida linden jiilaalka iyo xagaaga, cherry Japanese, robinia, geed katsura, geed diyaaradeed iyo maple Japanese.
Waddada cagta ee loogu talagalay Bernhard Paumgartner, oo caan ku noqday taariikh nololeedkiisa ku saabsan Mozart, wuxuu ku socdaa xuduudka magaalada hore wuxuuna ku xiraa Mariabellplatz oo leh albaabka laga soo galo Kurpark ilaa dabaqa yar ee dhulka, qaybta waqooyi ee Beerta Mirabell. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta aanad gelin jardiinooyinka waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad hesho musqul dadweyne marka hore.
Haddii aad dhinaca sare ka eegto Salzburg waxa aad arkaysaa in magaaladu ku taal webiga oo ay labada dhinac ka xigaan buuro yaryar. Koonfur-galbeed waxaa ku yaal gees wareeg ah oo ka kooban Festungsberg iyo Mönchsberg iyo waqooyi-bari ee Kapuzinerberg.
Buurta qalcadda ah, Festungsberg, waxay ka tirsan tahay cidhifka waqooyi ee Salzburg Pre-Alps waxayna ka kooban tahay dhagaxa limestone ee Dachstein. Mönchsberg, Monks' Hill, waxay ka kooban tahay isku-xidhka waxayna ku xidhaa galbeedka buurta qalcadaha. Looma jiidin Salzach Glacier sababtoo ah waxay ku taagan tahay hooska buurta qalcadaha.
Kapuzinerberg, oo ku taal dhinaca midig ee webiga sida buurta qalcadaha, ayaa iska leh cidhifka waqooyi ee Salzburg Limestone Pre-Alps. Waxa ay ka kooban tahay wajiyo dhagxaan taag ah iyo qolof ballaadhan oo inta badan ka samaysan limestone Dachstein oo lakabaysan iyo dhagax dolomite ah. Saamaynta xoqitaanka ee Salzach Glacier waxay siisay Kapuzinerberg qaabkeeda.
Qolka nasashada ee dadweynaha ee Mirabell Gardens Square ee Salzburg
Beerta Mirabell inta badan waa meesha ugu horeysa ee lagu booqdo safar maalinle ah oo lagu tago Salzburg. Basaska imanaya magaalada Salzburg waxay u ogolaadeen rakaabkoodii inay ka soo degaan T-isgoyska Paris-Lodron ee leh fagaaraha Mirabell iyo Dreifaltigkeitsgasse, Terminalka baska ee woqooyiga. Intaa waxaa dheer, meesha baabuurta la dhigto, CONTIPARK Parkplatz Mirabell-Congress-Garage, ee Mirabell Square oo ciwaanka saxda ahi yahay Faber Straße 6-8. Kani waa xiriirka si aad u tagto goobta baabuurka ee khariidadaha google. Dhanka wadada Mirabell Square nambarka 3 waxaa ku yaal musqul dadweyne oo bilaash ah. Isku xirka khariidadaha google-ka waxay ku siinaysaa meesha saxda ah ee musqusha dad waynaha si ay kaaga caawiso inaad ka hesho dabaqa hoose ee dhismo hadh ka hooseeya oo bixiya geedo.
Unicorn ee Salzburg Mirabell Gardens
Jaranjaro marmar ah oo neo-baroque ah, oo isticmaalaya qaybo ka mid ah balustrade laga soo bilaabo masraxa magaalada ee la dumiyey iyo taalooyinka unicorn, waxay ku xidhaa Kurgarten ee waqooyiga iyo dabaqa yar ee dhulka ee Jardiinooyinka Mirabell ee koonfurta.
Unicornku waa xayawaan u eg a faras la a geeskii foolkeeda. Waxaa la sheegaa inuu yahay xayawaan aad u daran, xoog badan oo qurux badan, cago badan, oo la qabsan karo oo keliya haddii gabadh bikrad ah la horgeeyo. Bikrad baa dhabanteeda ka booday, oo intay nuugtay ayay gaysay guriga boqorka. Talaabooyinka barxadda waxa loo adeegsaday sidii miisaan muusiko ah oo ay qaaday Maria iyo carruurta von Trapp ee Codka Muusiga.
Unicorns ee Tallaabooyinka taga Jardiinooyinka Mirabell
Laba unicorns dhagax Rafaa, fardo madaxa gees ah, jiifa lugaha ilaalinta "Tallaabooyinka Muusigga", iridda waqooyi ee laga galo Mirabell Gardens. Gabdho yar, laakiin male-awaal ah ayaa ku raaxaysanaya fuulitaanka. Unicorns-ku waxay si fiican ugu siman yihiin jaranjarooyinka si habluhu ay si toos ah ugu tallaabsadaan. Xayawaanka albaabka laga soo galo ayaa u muuqda in ay huriyaan male-awaalka gabdhaha. Ugaarsaduhu kaliya wuxuu ku soo jiidi karaa unicorn gabar yar oo saafi ah. Unicorn waxaa soo jiitay wax aan la qiyaasi karin.
Beerta Mirabell waxaa laga daawaday "Tallaabooyinka Muusiga"
Beerta Mirabell waa beer baroque ku taal Salzburg oo qayb ka ah Xarunta Taariikhda Dhaxalka Adduunka ee UNESCO ee magaalada Salzburg. Naqshadaynta Jardiinooyinka Mirabell ee qaabka ay hadda tahay waxa u wakiishay Amiir Archbishop Johann Ernst von Thun oo hoos imanaya jihada Johann Bernhard Fischer von Erlach. Sannadkii 1854 kii Beerta Mirabell waxaa dadweynaha u furay Imbaraadoor Franz Joseph.
Mirabell Palace waxaa la dhisay 1606-dii oo uu dhisay amiir-bashiip Wolf Dietrich gacaladiisa Salome Alt. Jaranjarada Marble ee Baroque waxay u socotaa ilaa Hall Marble of Mirabell Palace. Jaranjarada afarta duulimaad ee caanka ah (1722) waxay ku saleysan tahay naqshadeynta Johann Lucas von Hildebrandt. Waxaa la dhisay 1726-kii Georg Raphael Donner, oo ahaa farshaxan-yaqaankii ugu muhiimsanaa Bartamaha Yurub ee waqtigiisa. Halkii ay ka ahaan lahayd balustrade, waxa lagu xidhaa baalal male-awaal ah oo ka samaysan C-arcs iyo volutes oo leh qurxinta putti.
Dherer, oo timo maariin cas leh iyo indho cawlan, Salome Alt, haweeneyda ugu quruxda badan magaalada. Wolf Dietrich waxa ay is baratay iyada oo lagu guda jiro damaashaadka qolka cabitaanka ee magaalada ee Waagplatz. Halkaa waxaa lagu qabtay guddiyada rasmiga ah ee golaha deegaanka, waxaana ku soo idlaaday hawlihii aqooneed. Kadib markii loo doortay Amiir Archbishop Wolf Dietrich waxa uu isku dayay in uu helo sharci ay u suurto gali lahayd in isaga wadaad ahaan la guursado. Inkasta oo uu isku dayo dhexdhexaadin ah oo uu sameeyay adeerkiis, Cardinal Marcus Sitticus von Hohenems, mashruucani wuu fashilmay. Sannadkii 1606-dii waxa uu lahaa qalcadda Altenau, oo hadda loo yaqaan Mirabell, oo loo dhisay Salome Alt, oo u qaabaysan xaafadda Roman-ka ee Ville.
Pegasus u dhexeeya libaaxyada
Bellerophon, geesiga ugu weyn iyo dilaaga wuxuush, wuxuu fuushan yahay faraska duulaya ee la qabtay. Waxqabadkiisii ​​ugu waynaa waxay ahayd inuu dilo bahalkii Chimera, jir ari leh madax libaax iyo dabo mas. Bellerophon wuxuu kasbaday nacaybka ilaahyada ka dib markii uu isku dayay inuu fuulo Pegasus Mount Mount Olympus si ay ugu biiraan.
isha Pegasus in Maria iyo carruurtu ay ku boodaan Codka Muusiga marka ay ku heesayaan Do Re Mi. Pegasus, ee -awaalka rabaani ah faras waa farac ka mid ah Ciyaaryahan ilaah Bosidon, ilaaha fardaha. Meel kasta oo faraskii baalallaha ahaa qoobabkiisa dhulka ugu dhuftay, waxaa ka soo burqanayay il biyo ah.
Libaaxyada Ilaaliya Jaranjarada Bastion's
Laba libaax oo dhagax ah oo ku jiifa gidaarka bastion-ka, mid hore u yaal, kan kalena in yar kor u kacay oo xagga cirka eegaya, ayaa ilaalinaya albaabka laga soo galo dabaqa yar ee dhulka ilaa beerta baashaalka. Waxaa jiray saddex libaax oo saarnaa jaakada hubka Babenbergs. Dhinaca midig ee jaakadda hubka ee gobolka Salzburg waa libaax madow oo toosan oo u leexday midigta dahabka iyo bidixda, sida jaakada Babenberg ee hubka, waxay muujinaysaa bar qalin ah oo casaan ah, gaashaanka Austria.
Zwergerlgarten, beerta Dwarf Gnome
Beerta dwarf, oo leh farshaxanno laga sameeyay marmar Mount Untersberg, waa qayb ka mid ah beerta baroque Mirabell ee uu naqshadeeyay Fischer von Erlach. Xilligii baroque, dad aad u koray iyo kuwo gaaban ayaa laga shaqaaleysiiyay maxkamado badan oo Yurub ah. Waxaa lagu qiimeeyay daacadnimadooda iyo daacadnimadooda. Dwarfyadu waa inay xumaanta oo dhan ka fogeeyaan.
Western Bosket oo leh Hedge Tunnel
Bosquet-ka caadiga ah ee baroque-ga ayaa ahaa mid si farshaxanimo leh loo gooyay "alwaax" beerta baroque Mirabell ee Fischer von Erlach. Dhirta iyo xayndaabyada waxa dhex maray dhidibo toosan oo ballaadhineed hoolka oo kale ah. Bosket-ku wuxuu sidaas u sameeyay dhisme la mid ah dhismaha qalcadda oo leh waddooyinkeeda, jaranjarooyinka iyo hoolalka waxaana sidoo kale loo isticmaali jiray si la mid ah gudaha qasriga oo lagu soo bandhigo riwaayadaha qolka iyo madadaalada kale ee yar yar. Maanta bosket galbeedka ee Mirabell Castle wuxuu ka kooban yahay "dariiqa" saddex- saf ah oo geedo jiilaal ah, kuwaas oo lagu hayo qaab joomatari ahaan cube-qaabeeya gooyn joogto ah, iyo arcade leh trellis qaanso wareeg ah, tunnel xayndaab Maria iyo carruurtu waxay ku yaaceen iyagoo heesaya Do Re Mi.
Tulips Red ee naqshadaynta sariirta ubaxa baroque ee beerta weyn ee parterre ee Jardiinooyinka Mirabell, dhererka kaas oo ujeedkiisu yahay koonfurta jihada qalcadda Hohensalzburg ee ka sarreeya magaalada hore ee bidix ee Salzach. Ka dib markii cilmaaniyeedka Archdiocese ee Salzburg ee 1811, beerta waxaa dib loogu tarjumay qaabka beerta muuqaalka Ingiriisiga ee hadda by Crown Prince Ludwig ee Bavaria, iyada oo qayb ka mid ah aagagga baroque la ilaaliyo.
Sannadkii 1893-kii, goobta beerta waa la dhimay iyadoo ay ugu wacan tahay dhismaha Masraxa Salzburg, kaasoo ah dhismaha weyn ee ku dheggan koonfur-galbeed. Masraxa Gobolka Salzburg ee Makartplatz waxaa dhisay shirkadda Viennese Fellner & Helmer, taas oo ku takhasustay dhismaha tiyaatarada, sida Masraxa Magaalada New ka dib masraxa hore, kaas oo Amiir Archbishop Hieronymus Colloredo uu dhisay 1775 halkii qolka ballroom, uu lahaa in la dumiyo cillado xagga amniga ah awgeed.
Farshaxanada "Borghesi fencers" ee albaabka Makartplatz ayaa si sax ah u dhigma nuqullo ku salaysan farshaxan qadiim ah oo laga soo bilaabo qarnigii 17aad oo laga helay meel u dhow Rome oo hadda ku taal Louvre. Taallada qadiimka ah ee cabbirka nolosha ee dagaalyahanka la dagaallamaya fuusha waxa loo yaqaan fenser Borghesian. Xayndaabka Borghesian waxaa lagu kala soocaa horumarkiisa anatomical ee ugu wanaagsan sidaas darteedna wuxuu ahaa mid ka mid ah farshaxannada ugu caansan ee farshaxanka Renaissance.
Kaniisadda Trinity Quduuska ah, Dreifaltigkeitskirche
Sannadkii 1694-kii amiir Archbishop Johann Ernst Graf Thun iyo Hohenstein waxay go'aansadeen inay dhisaan guri wadaado cusub oo loogu talagalay labada kulliyadood ee uu aasaasay isaga iyo kaniisad loogu talagalay Trinity Quduuska ah, Dreifaltigkeitskirche, oo ku taal xadka bari ee beerta Hannibal ee markaa, jilbaha. goobta u dhaxaysa albaabka dhexe ee dhexe iyo qasriga Mannerist Secundogenitur. Maanta, fagaaraha Makart, beertii hore ee Hannibal, waxaa gacanta ku haya wejiga Kaniisadda Quduuska ah ee Trinity kaas oo Johann Bernhard Fischer von Erlach uu ka taagay bartamaha dhismayaasha kulliyadda, guriga wadaaddada cusub.
Guriga Mozart ee ku yaala Makart Square ee Salzburg
Gudaha "Tanzmeisterhaus", guri no. 8 on Hannibalplatz, kor u kaca, yar, square afar gees ah oo la siman dhidibka dheer ee Kaniisadda Trinity, kaas oo loo beddelay Makartplatz inta lagu guda jiro noloshii fannaanka kaas oo loo magacaabay Vienna by Emperor Franz Joseph I. macalinka qoob ka ciyaarka maxkamadda ayaa qabtay casharro qoob ka ciyaarka Aristocrats, Wolfgang Amadeus Mozart iyo waalidkiis waxay ku noolaayeen guri dabaq ah oo ku yaal dabaqa koowaad laga bilaabo 1773 ilaa uu u guuray Vienna 1781, hadda madxaf ka dib aqalka Getreidegasse halkaas oo Wolfgang Amadeus Mozart ku dhashay ayaa noqday mid yar.
Facade Church Trinity Quduuska ah
Inta u dhaxaysa munaaradaha soo baxaya, wejiga Kaniisadda Quduuska ah ee Trinity ayaa ku dhex wareegaysa dhexda dhexda oo leh daaqad wareegsan oo wareegsan oo leh jilicsanaan, oo u dhexeeya labajibbaaran iyo soo bandhigay, tiirar labanlaab ah, oo uu dhisay Johann Bernhard Fischer von Erlach laga bilaabo 1694 ilaa 1702. Daaro labada dhinacba leh oo gambaleel iyo gambaleel saacadeed leh. On saqafka, jaakadda hubka ee aasaasihii la qalloocan iyo seef, sida sifo iconographic dhaqameed ee Prince Archbishop Johann Ernst von Thun iyo Hohenstein, kuwaas oo jimicsi labadaba awood ruuxi ah iyo cilmaani. Gacanka dhexe ee concave wuxuu ku martiqaadayaa daawadayaasha inuu u soo dhawaado oo uu galo kaniisadda.
Tambour-ka, isku xirka, cylindrical, isku xirka daaqadaha furan ee u dhexeeya kaniisadda iyo qubbada, waxa uu u qaybsan yahay siddeed qaybood oo leh daaqado yar yar oo leydi ah iyada oo loo marayo pilasters labajibaaran oo jilicsan. Qubbada fresco-ka waxaa sameeyay Johann Michael Rottmayr qiyaastii 1700 wuxuuna muujinayaa caleemo-saarka Maria iyadoo la kaashanayo malaa'igaha quduuska ah, nebiyada iyo awoowayaasha.
Saqafka sare waxaa ku yaal tambor labaad oo aad uga yar sidoo kale qaabaysan oo leh daaqado leydi ah. Johann Michael Rottmayr wuxuu ahaa rinjiiyihii aadka loo ixtiraamo uguna mashquulka badnaa ee Baroque hore ee Austria. Waxa aad u qiimeeyay Johann Bernhard Fischer von Erlach, sida uu naqshadeeyay Kaniisadda Trinity waxaa dhisay amiir Archbishop Johann Ernst von Thun iyo Hohenstein laga bilaabo 1694 ilaa 1702.
Salzburg Trinity Kaniisadda Gudaha
Qolka weyn ee oval-ka ah waxaa u badan iftiinka ka soo iftiimaya daaqad semi-wareeg ah oo ku taal meel ka sarreysa meesha allabariga, taas oo u qaybsantay leydi yar yar, taas oo leydiyada yaryar ay u kala qaybsan yihiin waxa loogu yeero muraayadaha slug ee malab. Meesha sare waxay asal ahaan ka timid naqshad uu sameeyay Johann Bernhard Fischer von Erlach. Agabka meesha allabariga waa aedicula, qaab dhismeed marmar ah oo leh pilasters iyo gogol fidsan oo fidsan. Saddexmidnimada Quduuska ah iyo laba malaa'igood oo suubban ayaa lagu muujiyay sida koox caag ah.
Minbarka ay ku taal iskutallaabta wacdigu waxa la geliyey godka gidaarka ee midigta. Jeexyadu waxay ku yaalliin afarta darbi ee geesoodka ah ee ku yaal dabaqa marmar ah, kaas oo leh qaab xoojinaya oval-ka qolka. In crypt waxaa ku jira sarcophagus leh wadnaha dhisaha Prince Archbishop Johann Ernst Count Thun iyo Hohenstein oo ku salaysan naqshad uu sameeyay Johann Bernhard Fischer von Erlach.
Linzer Gasse, Waddada dheer ee dheer ee magaalada hore ee Salzburg ee ku taal bangiga midig ee Salzach, waxay keenaysaa ka soo kaca Platzl ilaa Schallmoserstraße ee jihada Vienna. Wax yar ka dib bilawga Linzer Gasse ee dhererka Stefan-Zweig-Platz, Francis Gate wuxuu ku yaalaa dhinaca midig, koonfurta, dhinaca Linzer Gasse. Francis Gate waa marin sare oo 2 dabaq ah, albaabka rustic-ku habboon ee Stefan-Zweig-Weg ilaa Dekadda Francis iyo sii socoshada Monastery Capuchin ee Capuzinerberg. Jidka weyn ee jidka weyn waxaa ku yaal kartoonkii ciidanka oo la sawiray oo leh jaakad hubka Count Markus Sittikus of Hohenems, laga bilaabo 1612 ilaa 1619 amiirkii aasaaskii Salzburg, dhisihii albaabka Francis. Kordhinta kartoonada ciidanka ayaa ah nafis kaas oo dhaleeceynta HL. Francis oo ku dhejinaya gabbaal la afuufay ayaa la muujiyay, laga bilaabo 1617.
Gaashaanka sanka ee Linzer Gasse Salzburg
Diirada sawirka laga qaaday Linzer Gasse wuxuu saaran yahay birta la sameeyay, oo sidoo kale loo yaqaan gaashaanka sanka. Gaashaammadii sanka gaashaammadu waxay birta ka samaynayeen birtuurtu ilaa qarniyadii dhexe. Farsamada la xayeysiiyay ayaa lagu soo jiitay calaamado ay ka mid yihiin furaha. Guilds waa shirkado farsamayaqaanno ah oo la abuuray qarniyadii dhexe si loo ilaaliyo danaha guud.
Sebastian Church Gudaha
In Linzer Gasse no. 41 waxa jira Kaniisadda Sebastiyaanka oo leh dhinaceeda dheer ee koonfur-bari iyo munaaradda wejigeeda oo la siman Linzer Gasse. Kaniisadda St. Sebastian ee ugu horreysay waxay taariikhdeedu ahayd 1505-1512. Waxaa dib loo dhisay 1749-1753. Meesha allabariga ee sare ee dabada wareega ee dib u guratay waxay leedahay dhisme marmar ah oo yar oo mug leh oo ay ku jiraan xidhmooyin pilasters ah, tiirar lamaane ah oo la soo bandhigay, gunti toosan oo rukuntay iyo korka sare ee codka. Bartamaha waxaa taallo taallo ah oo ay la socoto Maryan iyo cunuga laga soo bilaabo 1610kii. Qoraalka waxaa ku yaal gargaar Saint Sebastian laga soo bilaabo 1964.
Xabaalaha Portal Sebastian Salzburg
Helitaanka qabuuraha Sebastian ee Linzer Straße waxay u dhaxaysaa hobolada Kaniisadda Sebastian iyo Altstadthotel Amadeus. A portal qaanso semicircular, kaas oo xuduud u ah by pilasters, entablature iyo top ka 1600 oo leh gable la afuufay, kaas oo ka kooban jaakada hubka ee aasaasihii iyo wax dhisay, Prince Archbishop Wolf Dietrich.
Qubuuraha Sebastian wuxuu ku xiraa waqooyi-galbeed ee Kaniisadda Sebastian. Waxaa la dhisay laga bilaabo 1595-1600 iyada oo ka wakiil ah Amiir Archbishop Wolf Dietrich oo ku taal meel xabaal ah oo jirtay tan iyo bilowgii qarnigii 16aad, oo loo qaabeeyey Campi Santi ee Talyaaniga. Camposanto, Talyaani oo loogu talagalay "goobta quduuska ah", waa magaca Talyaani ee qabuuraha barxadda u eg oo gudaha u furan. Qubuuraha Sebastian waxaa dhinac walba ku hareeraysan tiirarka tiirarka. Gawaadhida gawaadhida gawaadhida ah waxa lagu xardhay godad gumaar ah oo u dhexeeya suumanka fidsan.
Dhulka qabuuraha Sebastian ee ku xiga waddada loo maro mausoleum, xamaasada Mozart Johann Evangelist Engl ayaa lahaa qabri bandhig ah oo la dhisay oo ka kooban qabriga qoyska Nissen. Georg Nikolaus Nissen wuxuu guur labaad la yeeshay Constanze, oo ah carmal Mozart. Mozart aabbihiis Leopold si kastaba ha ahaatee waxaa lagu aasay waxa loogu yeero qabriga la wadaago lambarka 83, maanta qabriga Eggersche ee dhinaca koonfureed ee xabaalaha. Wolfgang Amadeus Mozart waxaa lagu aasay St. Marx ee Vienna, hooyadiis Saint-Eustache ee Paris iyo walaashii Nannerl ee St. Peter ee Salzburg.
Munich Kindl ee Salzburg
Cidhifka dhismaha ee geeska Dreifaltigkeitsgasse / Linzer Gasse, waxa loogu yeero "Münchner Hof", farshaxan ayaa ku dheggan cidhifka soo baxaya ee dabaqa koowaad, oo muujinaya raxmad qaabaysan oo gacmaha kor loo qaaday, gacanta bidixna haysata buug. Koodhka rasmiga ah ee hubka Munich waa nin raashiin ah oo gacanta bidix ku haysta buug dhaar ah, oo ku dhaaranaya midigta. Dharka hubka ee Munich waxaa loo yaqaan Münchner Kindl. Münchner Hof waxay taagan tahay hudheelka ugu da'da weyn ee brewery ee Salzburg, "Goldenes Kreuz-Wirtshaus", ayaa istaagay.
Salzach ee Salzburg
Salzachku wuxuu u qulqulaa woqooyi ilaa hudheelka. Waxay magaceeda ku leedahay maraakiibta milixda ee ka shaqeysa webiga. Cusbada ka timid Hallein Dürrnberg waxay ahayd isha ugu muhiimsan ee dakhliga ee wadaadada Salzburg. Salzach iyo Inn waxay ku yaalliin xudduudda Bavaria halkaas oo ay sidoo kale ku yaalliin kayd milix ah oo ku yaal Berchtesgaden. Labada xaaladoodba waxay si wada jir ah u aasaaseen isku dhacyada u dhexeeya Archbishopric ee Salzburg iyo Bavaria, kuwaas oo gaadhay heerkoodii ugu sarreeyey 1611kii oo ay qabsadeen Berchtesgaden ee Amiir Archbishop Wolf Dietrich. Natiijo ahaan, Maximilian I, Duke of Bavaria, wuxuu qabsaday Salzburg wuxuuna ku qasbay Amiir Archbishop Wolf Dietrich inuu ka tago.
Iyada oo loo marayo dariiqa weyn ee hoolka degmada waxaad u gudubtaa fagaaraha hoolka magaalada. Dhammaadka xarunta dawladda hoose ee munaaradda dawladda hoose waxay taagan tahay dhidibka dhinaca ee wejiga rococo ee dhismaha. Taawarka hoolkii hore ee dawladda hoose waxa qotomiyey tuugo waaweyn oo ka korreeya kooniska oo wata geesaha geesaha . Taawarka waxa ku yaal munaarad yar oo gambaleed oo laba geesle ah oo leh qubbad qaybo badan leh. Dawanka gambaleelka wuxuu ka kooban yahay laba gambale oo yaryar oo laga soo bilaabo qarniyadii 14aad iyo 16aad iyo gambaleel weyn oo laga soo bilaabo qarnigii 20aad. Qarnigii dhexe, dadka deegaanka waxay ku tiirsanaayeen gambaleelka, maadaama saacadda munaaradda lagu daray kaliya qarnigii 18aad. Gambaleelka ayaa dadka deegaanka siisay waqti, waxaana la garaacay haddii uu dab kaco.
Salzburg beddelka Markt
Alte Markt waa afar geesle ah oo laga taabtay dhanka waqooyi ee cidhiidhiga ah ee wadada Kranzlmarkt-Judengasse oo ku fidsan qaab leydi ah oo ku taal koonfurta una furto dhanka guriga. Barxadda waxaa loo qaabeeyey saf xiran oo heersare ah, 5-ilaa 6-dabaq ah oo guryaha magaalada ah, kuwaas oo badankoodu ahaayeen qarniyadii dhexe ama qarnigii 16-aad. Guryuhu waa qayb 3-ilaa 4-, qayb 6-ilaa 8- dhidib ah waxayna inta badan leeyihiin daaqado baraf ah oo leydi ah iyo saqafyo muuqaalaysan.
Inta badan ee wejiyada caato ah ee malaastaan ​​ah oo leh daaqado toosan, qurxin qaabka jeexan ama qurxinta jilicsan ee qarnigii 19aad ayaa go'aaminaya dabeecadda booska. Qaabka slab ee Josephine waxa uu isticmaalay dhismayaal fudud oo ku yaal agagaaraha, kuwaas oo kala diray nidaamka tectonic ee lakabyada derbiyada iyo saqafyada. Bartamaha barxadda hoose ee Alter Markt waxaa taagan isha hore ee suuqa, oo quduus looga dhigay St. Florian, oo leh tiir Floriani oo ku taal bartamaha isha.
Barxada ceelka octagonal ee laga sameeyay marble Untersberg waxa la dhisay 1488 halkii ceel qadiim ah ka dib markii tuubbo biyaha la cabbo laga dhisay Gersberg oo dulmartay buundada magaalada ilaa suuqii hore. Qurxinta, rinji rinji spiral on isha taariikhaha laga bilaabo 1583, seedaha kuwaas oo ku dhamaanaya grotesques ka samaysan biraha xaashida ah, Iribixes, shimbiraha, fuushannada iyo madaxyada.
Alte Markt waa afar geesle ah oo laga taabtay dhanka waqooyi ee cidhiidhiga ah ee wadada Kranzlmarkt-Judengasse oo ku fidsan qaab leydi ah oo ku taal koonfurta una furto dhanka guriga.
Barxadda waxaa loo qaabeeyey saf xiran oo heersare ah, 5-ilaa 6-dabaq ah oo guryaha magaalada ah, kuwaas oo badankoodu ahaayeen qarniyadii dhexe ama qarnigii 16-aad. Guryuhu waa qayb 3-ilaa 4-, qayb 6-ilaa 8- dhidib ah waxayna inta badan leeyihiin daaqado baraf ah oo leydi ah iyo saqafyo muuqaalaysan.
Inta badan ee wejiyada caato ah ee malaastaan ​​ah oo leh daaqado toosan, qurxin qaabka jeexan ama qurxinta jilicsan ee qarnigii 19aad ayaa go'aaminaya dabeecadda booska. Qaabka slab-ka ee Josephine waxa uu isticmaalay dhismayaal fudud oo ku yaalla agagaarka agagaarkeeda, kuwaas oo kala diray nidaamka tectonic ee lakabyada derbiyada iyo saqafyada. Darbiyada guryaha waxaa lagu qurxiyey xariijimo ka sameysan tiiraryo waaweyn oo lagu qurxiyey.
Bartamaha barxadda hoose ee Alter Markt waxaa taagan isha hore ee suuqa, oo quduus looga dhigay St. Florian, oo leh tiir Floriani oo ku taal bartamaha isha. Barxada ceelka octagonal ee laga sameeyay marble Untersberg waxa la dhisay 1488 halkii ceel qadiim ah ka dib markii tuubbo biyaha la cabbo laga dhisay Gersberg oo dulmartay buundada magaalada ilaa suuqii hore. Gersberg waxa ay ku taal dooxada koonfur-galbeed ee u dhaxaysa Gaisberg iyo Kühberg, taas oo ah cirifka waqooyi-galbeed ee Gaisberg. Qurxinta, rinji rinji spiral on isha taariikhaha laga bilaabo 1583, seedaha kuwaas oo ku dhamaanaya grotesques ka samaysan biraha xaashida ah, Iribixes, shimbiraha, fuushannada iyo madaxyada.
Heerka Florianibrunnen, dhanka bari ee barxadda, guriga no. 6, waa farmashiyaha maxkamada amiirkii hore ee la aasaasay 1591 guri leh daaqadaha barrooque ee soo daahay iyo saqafyada leh mugga sare ee bartamihii qarnigii 18-aad.
Farmashiyaha maxkamadda hore ee amiirka-Archbishop ee dabaqa hoose wuxuu leeyahay dukaan 3-dhinac ah oo ka soo jeeda agagaarka 1903. Farmashiyaha la ilaaliyo, qolalka shaqada ee farmashiyaha, oo leh khaanadaha, miiska warqadda daawada iyo sidoo kale weelasha iyo qalabka laga soo bilaabo qarnigii 18aad waa Rococo . The Farmasiga markii hore waxa uu ku yaalay guriga dariska ah ee no.7 waxaana kaliya loo wareejiyay halka uu hada joogo,guri no. 6, sanadkii 1903dii.
Kafee Tomaselli Alter Markt No. 9 ee Salzburg waxaa la aasaasay 1700. Waa kafateeriyada ugu da'da weyn Austria. Johann Fontaine, oo ka yimid Faransiiska, ayaa la siiyay fasax uu ugu adeego shukulaatada, shaaha iyo kafeega ee Goldgasse ee u dhow. Ka dib dhimashadii Fontaine, qasnadda qaxwaha ayaa dhowr jeer isbedelay gacmaha. Sannadkii 1753, gurigii kafeega ee Engelhardsche waxa la wareegay Anton Staiger, oo ahaa sayidkii maxkamadda Archbishop Siegmund III. Tiri Schrattenbach. Sannadkii 1764kii Anton Staiger waxa uu iibsaday gurigii Abraham Zillnerische oo ku yaalla cidhifka suuqii hore, guri leh weji 3 dhidib ah oo ku wajahan Alter Markt iyo weji 4-dhidib ah oo u jeedda Churfürststrasse waxaana la siiyay gidaar sagxad ah oo dhulka ah. daaqadaha 1800. Staiger wuxuu gurigii qaxwaha u rogay dhisme qurux badan oo dabaqadda sare ah. Xubno ka tirsan qoysaska Mozart iyo Haydn ayaa sidoo kale booqday Kafee Tomaselli. Carl Tomaselli wuxuu iibsaday kafateeriyada 1852 wuxuuna furay dukaanka Tomaselli ka soo horjeedka kafateeriyada 1859. Baranadda waxaa ku daray 1937/38 Otto Prossinger. Dagaalkii Labaad ee Adduunka ka dib, Maraykanku waxa uu kafateeriyada ku shaqayn jiray magaca afartan labaad ee Café.
Mozart Monument waxaa qoray Ludwig M. Schwanthaler
Ludwig Michael von Schwanthaler, oo ah farcankii ugu dambeeyay ee qoyska sculptor Sare ee Australiya Schwanthaler, ayaa sameeyay taallada Mozart 1841-kii munaasabadda 50-aad ee dhimashadii Wolfgang Amadeus Mozart. Farshaxanka naxaasta ah ee dhererkiisu ku dhow yahay saddex mitir, oo uu tuuray Johann Baptist Stiglmaier, oo ah maamulaha aasaaska macdanta boqortooyada ee Munich, ayaa la dhisay Sebtembar 4, 1842 Salzburg oo ku taal bartamaha wixii markaas ahaa Michaeler-Platz.
Sawirka naxaasta qadiimiga ah wuxuu muujinayaa Mozart oo ku jira jaakad casri ah oo ka soo horjeeda, jaakad, stylus, xaashi muusik (dubid) iyo ubax laurel. Tusaalooyinka loo fuliyay sida naxaasta naxaasta ah ayaa astaan ​​​​u ah shaqada Mozart ee goobaha kaniisadaha, riwaayadaha iyo muusiga qolka iyo sidoo kale opera. Mozartplatz-ka maanta waxaa la sameeyay 1588 iyadoo la burburiyay guryo kala duwan oo magaalada ah oo hoos imaanayay Amiir Archbishop Wolf Dietrich von Raitenau. Guriga Mozartplatz 1 waa waxa loogu yeero Deganaanshaha Cusub, kaas oo Matxafka Salzburg uu ku yaal. Taallada Mozart waa mid ka mid ah maaddooyinka kaararka boostada ee ugu caansan Salzburg magaaladii hore.
Drum Dome ee Kollegienkirche ee Salzburg
Hoyga gadaashiisa, dubka durbaanka ee Kaniisadda Collegiate Salzburg, oo laga dhisay aagga Jaamacadda Paris Lodron laga bilaabo 1696 ilaa 1707 oo uu qoray Amiir Archbishop Johann Ernst Graf von Thun iyo Hohenstein oo ku saleysan naqshado uu sameeyay Johann Bernhard Fischer von Erlach iyadoo ay kormeerayaan Mason aster-ka maxkamada Johann Grabner waxa loo qaybiyaa afar gees oo labajibbaaran.
Dabbaanka agtiisa waxaa ku yaal munaaradaha baalaysan ee Kaniisadda Collegiate, oo geesahooda ku yaal oo aad ku arki karto taallo. Faynuus, qaab dhismeed furan oo wareegsan, ayaa la dul dhigayaa durbaanka ka sarreeya isha qubbad. Kaniisadaha Baroque, faynuusku had iyo jeer wuxuu sameeyaa dhamaadka qubbad wuxuuna u taagan yahay isha muhiimka ah ee iftiinka maalinta.
Deganaanshaha Square Salzburg
Residenzplatz waxaa abuuray amiirkii Archbishop Wolf Dietrich von Raitenau isagoo ka saaray guryo isku xigta oo magaalada Aschhof ku dhowaa 1590, barxad yar oo u dhiganta maanta dhismaha weyn ee Hypo ee Residenzplatz, kaas oo daboolay qiyaastii 1,500 m², iyo qabuuraha cathedral, oo waqooyiga ka xigay. cathedral ku yaal. Sida beddelka xabaalaha cathedral, qabuuraha Sebastian waxaa la abuuray soo socda si ay kaniisad St. Sebastian ee bangiga midig ee magaalada jir ah.
Dhanka Aschhof iyo dhanka guryaha magaalada, derbi adag ayaa ku wareegay qabuuraha cathedral wakhtigaas, derbiga qalcaddii, kaas oo u taagan soohdinta u dhaxaysa magaalada amiirka iyo magaalada. Wolf Dietrich waxa kale oo uu gidaarkan dib ugu soo celiyay cathedral 1593. Sidaas ayaa loo sameeyay barxadda ka soo hor jeedda hoyga hore iyo kan cusub, oo markaa loo yaqaanay fagaaraha wayn.
Maxkamadda Arches isku xirka fagaaraha Cathedral iyo Franziskaner Gasse
Waxa loogu yeero Wallistrakt, oo maanta ku taal qayb ka mid ah Jaamacadda Paris-Lodron, waxaa la aasaasay 1622-kii Prince Archbishop Paris Count von Lodron. Dhismaha waxaa loo magacaabay Wallistrakt oo ka timid Maria Franziska Countess Wallis deggane.
Qaybta ugu da'da weyn ee marinka Wallis waa waxa loogu yeero dhismaha barxadda barxadda oo leh waji saddex dabaq ah oo ka samaysan derbiga galbeed ee fagaaraha cathedral. Dabaqyada waxaa loo qaybiyaa qaybo siman oo labajibbaaran, oo dhejisyo toosan oo daaqaduhu ku fadhiyaan. Wajahadda fidsan waxa si toos ah u xoojiyay tiirarka geesaha daxalaysan iyo faashashyada daaqadaha.
Dabaqa weyn ee dhismaha qardamada maxkamadda ayaa ku yaalla dabaqa 2-aad. Waqooyiga, waxay xuduud la leedahay garabka koonfureed ee degaanka, koonfurta, oo ku taal Archabbey ee St. Peter. Qeybta koonfureed ee dhismaha qadiimiga ah ee maxkamada waxaa ku yaal Matxafka St. Peter, oo qayb ka ah Matxafka DomQuartier. Guryaha Wolf Dietrich's amiir- wadaadku waxay ku yaalliin aaggan koonfureed ee dhismaha maxkamadda.
Arcades-ku waa 3- dhidib ah, 2-dabaq oo tiir ah oo la dhisay 1604-tii oo hoos timaada Amiir Archbishop Wolf Dietrich von Raitenau. Qanjirrada barxadda waxay ku xiraan Domplatz oo leh dhidibka Franziskanergasse Hofstallgasse, kaas oo si toos ah ugu socda wejiga cathedral waxaana la dhameeyay 1607.
Iyada oo la soo marayo daaradaha barxadda ayaa mid ka soo galay afaafka hore ee kaniisadda cathedral oo ka yimid galbeedka, sida iyada oo loo marayo qaanso guul leh. "porta triumphalis", oo markii hore loogu talagalay in lagu furo shan geesood oo fagaaraha cathedral, ayaa door ka ciyaaray dhamaadka socodka amiir- Archbishop.
Salzburg Cathedral waa quduus in hll ah. Rupert iyo Virgil. Kaalmada waxaa la xusaa Sebtembar 24-keeda, Maalinta St. Rupert. Salzburg Cathedral waa dhismo Baroque ah oo la furay 1628 oo uu sameeyay Amiir Archbishop Paris von Lodron.
Isgoysku wuxuu ku yaalaa bari, qaybta hore ee cathedral. Xagga sare ee isgoysku waa 71 mitir durbaanka sare ee cathedral oo leh pilasters gees iyo daaqado leydi ah. Qubbada dhexdeeda waxaa ku yaal siddeed frescoes oo leh muuqaallo ka yimid Axdigii Hore oo laba saf ah. Muuqaalladu waxay la xidhiidhaan muuqaallada xamaasadda Masiixa ee ku dhex yaal nave. Inta u dhaxaysa safafka frescoes waa saf leh daaqado. Wakiilo ka mid ah afarta wacdiyayaal ayaa laga heli karaa qaybaha dusha sare ee qubbada.
Xagga sare ee tiirarka isgoysyada jiidhida waxaa ku yaal xargaha trapezoidal si looga gudbo qorshaha sagxadda dabaqa ah ee isgoysyada oo loo gudbo durbaanka octagonal. Qubbadu waxay leedahay qaab qafis guri keniisad ah, oo leh dusha qalloocan oo cidhiidhi ah xagga sare ee ka sarreeya saldhigga octagonal ee durbaanka ee dhinac kasta oo geeso ah. In vertex dhexe waxaa jira qaab-dhismeedka furan oo ka sarreeya isha qubbad, faynuuska, kaas oo Ruuxa Quduuska ah ku yaal sida qoolley oo kale. Isgoysku wuxuu helaa ku dhawaad ​​dhammaan iftiinka ka imanaya faynuuska qubbada.
In Salzburg Cathedral galay heesta hal-nave iftiinka iftiimay, taas oo meesha allabariga ee xorta ah taagan, qaab-dhismeedka ka samaysan marmar ah pilasters iyo qaloocsan, afuufay gable, la quusiyo. Dusha sare ee meesha allabariga oo leh gabbaal saddex xagal ah oo la afuufay waxaa lagu qaabeeyey codad dhaadheer iyo caryatids. Qaybta allabariga waxay tusinaysaa sarakicidda Masiixa oo leh Hll. Rupert iyo Virgil qayb ka mid ah. In mensa, miiska meesha allabariga, waxaa jira reliquary of St. Rupert iyo Virgil. Rupert wuxuu aasaasay St. Peter, keniisaddii ugu horreysay ee Austria, Virgil wuxuu ahaa abbot of St. Peter wuxuuna ka dhisay kaniisaddii ugu horreysay ee Salzburg.
Nave ee Salzburg Cathedral waa afar-bayed. Nave-ga ugu weyn waxaa la socda labada dhinac oo ay weheliyaan safka kaniisadaha iyo oratorios sare. Darbiyada waxaa u habaysan qaab-dhismeed laba-jibbaaran oo si weyn u habaysan, oo leh fallaadho siman iyo caasimado isku dhafan. Dusha sare ee pilasters waxaa ku yaal meel wareegsan, oo qolofaysan oo foosto ay ku dul taagan tahay xadhig labajibbaaran.
Garaaciddu waa sawirka gees-jilicsan oo ku wareegsan soo bixitaan darbi toosan ah, oo jiidaya koorne ka sarreeya qayb soo baxay. Erayga entablature waxa loo fahmay in uu ula jeedo dhamaan qaybaha qaab dhismeedka jiifka ah ee ka sarreeya tiirarka.
Qolalka u dhexeeya pilaster-ka iyo dhismaha waxaa ku yaal barxadyo dhaadheer oo qotonsan, balakoonno soo baxay oo ku dul yaal consoles-yada codka leh iyo albaabo afka ah oo laba qaybood ka kooban. Oratorios, qolal yar oo kala duwan oo lagu tukado, waxay ku yaalliin sida qoryo ku yaal gallery ee nave waxayna leeyihiin albaabbada qolka weyn. Aftahanimadu inta badan uma furna dadweynaha, laakiin waxaa loo qoondeeyay koox gaar ah, tusaale ahaan wadaaddada, xubnaha nidaamka, walaalaha ama rumaystayaasha caanka ah.
Gacmaha rogaal celiska ah ee hal-jidka ah iyo kooxda heesta mid kastaa waxay ku xidhaa harqood leydi ah oo ay isku gooyaan labajibbaaran ee wareega badheed. In conche, semi-circular apse, ee heesta, 2 ka mid ah 3 dabaqa daaqadaha waxaa lagu daraa pilasters. U gudbida isgoysyada marinka weyn ee nave, gacmaha is rogaya iyo kooxda heesta waxa lagu cidhiidhiyaa lakabyo badan oo pilasters ah.
Trikonchos-ka waxaa daadiyay iftiin halka nave uu ku jiro mugdi madow sababtoo ah iftiinka kaliya ee aan tooska ahayn. Si ka duwan qorshaha dabaqa ah sida iskutallaab Laatiinka ah, kaas oo nave toosan oo ku yaala aagga isgoysyada ay ka gudubto xaglaha saxda ah si la mid ah transept toosan, ee heesta saddexda konji, trikonchos, saddex konches, ie apses semicircular oo isku mid ah. , dhinacyada afargeeska ah ayaa sidan oo kale ah midba midka kale si uu qorshaha dabaqa u leeyahay qaabka caleen caleen ah.
Stuko cad oo leh waxyaabo qurxin badan oo madow oo hoosta ka gooyay iyo niyad-jabku waxay qurxiyaan festoons-ka, muuqaalka qurxinta ee hoose ee qaansooyinka, marinnada kaniisadda iyo aagagga derbiga ee u dhexeeya pilasters. Stucco waxay ku kor fidsan tahay entablature-ka iyada oo leh jilicsanaan jilicsan oo waxay samaysaa taxane joomatari ah oo leh fiimyo si dhow isugu xidhan oo ku dhex yaal godka u dhexeeya xargaha. Dabaqa cathedralku wuxuu ka kooban yahay Untersberger dhalaalaya iyo marmar Adnet midab casaan ah.
Qalcadda Hohensalzburg waxay ku taal Festungsberg oo ka sarreysa magaaladii hore ee Salzburg. Waxaa dhisay Archbishop Gebhard, oo ah qof la garaaco oo ka tirsan Archdiocese ee Salzburg, qiyaastii 1077 sida qasri Romanesque oo leh darbi wareeg ah oo ku wareegsan buurta. Archbishop Gebhard waxa uu ka shaqaynayay kaniisada maxkamada ee Emperor Heinrich III, 1017 - 1056, Roman-German King, Emperor iyo Duke of Bavaria. Sannadkii 1060 kii wuxuu yimid Salzburg isagoo ah hoggaamiyaha kiniisadda. Wuxuu inta badan naftiisa u huray aasaasida Gurk diocese (1072) iyo Benedictine monastery Admont (1074).
Laga soo bilaabo 1077 wixii ka dambeeyay wuxuu ku qasbanaaday inuu sii joogo Swabia iyo Saxony 9 sano, sababtoo ah ka dib markii la sii daayay oo laga cayriyay Henry IV wuxuu ku biiray boqorkii ka soo horjeeday Rudolf von Rheinfelden oo iskuma uu sheegan karo Heinrich IV. ee wadaadkiisa. Qiyaastii 1500 oo qolal nool oo hoos yimaada Archbishop Leonhard von Keutschach, oo xukumay absolutist iyo nepotist, ayaa si wanaagsan loo qalabeeyay, qalcaddana waxaa lagu ballaariyay muuqaalkeeda hadda. Go'doominta kaliya ee aan lagu guulaysan ee qalcadda waxay ka dhacday Dagaalkii Beeralayda ee 1525. Tan iyo markii cilmaaniyeedka Archbishopric ee 1803, qalcadda Hohensalzburg waxay ku jirtay gacanta dawladda.
Salzburg Kapitel Horse Balli
Horeba qarniyadii dhexe waxaa jiray "Rosstümpel" oo ku yaal Kapitelplatz, wakhtigaas oo weli ku dhex jira bartamaha square. Sida uu qabo Amiir Archbishop Leopold Freiherr von Firmian, oo uu adeer u yahay Amiir Archbishop Johann Ernst Graf von Thun iyo Hohenstein, dhismaha cusub ee cruciform oo leh geeso qaloocsan iyo balustrade ayaa la dhisay 1732 sida uu qabo naqshad uu sameeyay Franz Anton Danreiter, kormeeraha guud ee Salzburg jardiinooyinka maxkamadda.
Helitaanka fardaha barkada biyaha waxay si toos ah ugu socotaa kooxda farshaxanimada, taas oo muujinaysa godka badda ee Neptune oo leh trident iyo taaj ku saabsan faras badeed oo biyo leh oo leh 2 tritons oo biyo ah oo dhinacyada ah, xayawaan isku dhafan, kala badh kuwaas oo kala badh ah. Waxay ka kooban yihiin jidhka sare ee bini'aadamka iyo kalluun u eg jidhka hoose oo leh dabada, oo ku yaal meel wareeg ah oo ku taal aedicle oo leh pilaster labajibbaaran, entablature toosan iyo dusha sare ee galeed volute ah oo taaj lagu dhejiyay weelal qurxin ah. Baroque-ga, farshaxanka dhaqaaqa waxaa sameeyay sawir-qaadaha Salzburg Josef Anton Pfaffiner, kaas oo sidoo kale naqshadeeyay isha Floriani ee Alter Markt. Dusha sare ee daawashada waxaa ku yaal taariikh-qoraal ah, oo ku qoran Laatiinka, kaas oo xarfaha waaweyn ee la iftiimiyay ay bixinayaan tirada sanadka sida tiro ahaan, oo leh jaakad xardhan oo hubka ah oo uu leeyahay Amiir Archbishop Leopold Freiherr von Firmian ee beerta gable.
Deganaanshaha Hercules Fountain Salzburg
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee aad aragto markaad soo galayso barxadda ugu weyn ee hoyga hore ee Residenzplatz waa niche grotto oo leh il biyo ah iyo Hercules oo dilaya masduulaagii hoostiisa arcades of vestibule galbeedka. Sawirada Hercules waa taallooyin ka mid ah farshaxanka Baroque loo xilsaaray oo loo adeegsaday dhexdhexaad siyaasadeed. Hercules waa geesi caan ku ah xooggiisa, oo ka mid ah khuraafaadka Giriigga. Cibaadada geesiga ah waxay door muhiim ah ka ciyaartay gobolka, sababtoo ah rafcaanka tirooyinka rabbaaniga ah waxay matalaan sharci iyo dammaanad ilaalinta rabbaaniga ah.
Sawirka dilka masduulaagii Hercules wuxuu ku salaysan yahay naqshad uu sameeyay Amiir Archbishop Wolf Dietrich von Raitenau, kaasoo lahaa degenaanshaha cusub ee bariga cathedral-ka oo dib loo dhisay iyo hoyga dhabta ah ee hoggaamiyaha kiniisadda ee galbeedka cathedral ayaa si weyn dib loo dhisay.
Qolka Shirarka ee Salzburg
Hieronymus Graf von Colloredo, hoggaamiyaha hoggaamiyaha kiniisadda Salzburg ee ugu dambeeyay ka hor intaan cilmaaniyeedka 1803, lahaa derbiyada qolalka gobolka ee guriga lagu qurxiyey qurxin ganaax ah oo cad iyo dahab by malaasta maxkamadda Peter Pflauder waafaqsan dhadhan classicist ee wakhtiga.
Dabaqooyinkii hore ee qadiimiga ahaa ee la ilaashaday laga soo bilaabo 1770-meeyadii iyo 1780-meeyadii. Sannadkii 1803dii wadaadkii wadaadka waxa loo beddelay maamul cilmaani ah. U gudubka maxkamada Imperial, degenaanshiyaha waxaa loo isticmaali jiray qoyska Imperial ee Australiya deganansho labaad. Habsburgs-ku waxay qolalka dawladda ku diyaariyeen alaab guri oo laga keenay Hofimmobiliendepot.
Qolka shirku wuxuu u badan yahay iftiinka korantada ee 2 chandeliers, oo markii hore loogu talagalay in lagu isticmaalo shumacyada, oo ka laalaada saqafka. Chamdeliers waa walxo iftiin leh, kuwaas oo sidoo kale loogu yeero "Luster" gudaha Austria, kuwaas oo la isticmaalo ilo dhowr ah oo iftiin ah iyo muraayado si ay u leexiyaan iftiinka waxay soo saaraan ciyaar nalal ah. Chandeliers waxaa badanaa loo isticmaalaa ujeedooyinka matalaada ee hoolalka la iftiimiyay.